Tilmaamaha astaanta Om | Tattoo
Ma aha Cherry | | Tattoos diimeed
Markaan raadineyno naqshad si aan u sawirno, ilaa aan horey u cadeyn waxa aan dooneyno, waxaan ku tiirsannahay wax micno weyn noo leh, sida astaanta Om. Mana hilmaami karno inaan u xirnaan doonno nolosheenna maqaarkeeda, sidaas darteed waa inay noqotaa wax inay runti ina soo gaadhayso iyo in aysan ahayn kaliya bilicsanaanta.
Taasi waa sababta maanta aan uga hadlayno astaan ​​aad u qoto dheer, caan ah oo dhiirrigelin leh oo leh fursado badan oo kala duwan, sida aan hoos ku arki doonno. Dhab ahaantii, waxaan ka hadalnaa tattoos leh astaanta Om. By habka, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad fiiriso maqaalkan la xiriira Tattoo yoga, liis dhamaystiran oo loogu talagalay dhiirigelinta.
1 Micnaha Om tattoos
2 Halkeen ka helnaa astaantan?
3 Om calaamadaha fikradaha tattoo
3.2 Dhamaan mantra
3.3 Om laabta
3.4 Ganesha, ilaaha maroodiga
3.5 Om leh unalome
3.6 Xamsa iyo Om
3.7 Tilmaamaha Om oo leh geed
3.8 Tattoo Om oo leh ubaxyo lotus ah
Micnaha Om tattoos
Sidii aan sheegnay, mid ka mid ah astaamaha ugu badan ee la xardho waa Om. Waa mid ka mid ah mantrasyada ugu muqaddaska ah diimaha dharqaayadaha, waxay astaan ​​u tahay ilaahnimada Brahman iyo adduunka oo dhan. Hindusku waa codka aasaasiga ah, asalka iyo mabda'a badankood mantras rabbaani ah oo xoog badan, ereyo ama codad. Astaanta Om, waxaan ka horreynaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Dhanka kale, macnaheedu waa midnimo kan ugu sarreeya, sare, midowga u dhexeeya ruuxa iyo jidhka. Waa dhawaaqa muqadaska ah, dhawaqa ay ka yimaadaan dhammaan codadka kale.
Heerka sawirka, wuxuu bixiyaa naqshado gaar ah, isagoo asal ahaan ruuxi ah, iyo seddexdiisa qalooc macnaheedu waa miyirka aadanaha iyo dhammaan ifafaalaha jireed. Dhibcaha calaamaddu waxay ka dhigan tahay xaaladda ugu sarraysa ee miyir-qabka, waa midnimo, waa xoog.
Xaqiiqdii, ku dhawaaqida dhawaaqa Om wuxuu la xiriiraa saddex macne oo waaweyn taasi waxay koobaysaa wax walba oo aan dhahnay. Sidaa darteed, iyadoo la tixgelinayo ku dhawaaqida asalka ah waxay umuuqataa wax badan Aum:
La a waxay astaan ​​u tahay bilowgii, abuurkii waxaa ku soo kordhay Brahma, ilaahii abuuraha.
La u waa sii socoshada nolosha, oo ay ku dheehan tahay ilaah Vishnu.
Ugu dambayntiina m waxay astaan ​​u tahay Shiva, ilaaha wax halaagga.
Saddexdaas ilaah waxay muujinayaan trimurti, ilaahnimada ilaahyada ilaaliya dheelitirka adduunka, iyo in ay xambaarsan tahay mid kale oo ka mid ah macnaha ugu dambeeya ee astaanta Om, dheelitirka lagama maarmaanka u ah jiritaanka guud ahaan in la sii wado.
Halkeen ka helnaa astaantan?
Astaanta Om waa mid caan ku ah dadka oo dhan, in kasta oo ay dhawaanahan u timid Galbeedka. Kahor intaanay joogin diimaha ugu waaweyn ee Hindiya, Hinduuga, Budhiismka iyo Jainismka, halkaas oo ay caadi ka tahay in laga helo labadaba qoraallada xurmada leh., sida dhismayaasha, sawir gacmeedyada iyo dhammaan noocyada meelaha aad rabto inaad macneheeda ka muujiso. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo qori karaa siyaabo badan oo kala duwan, ha ahaato Sanskrit, Tibetan, Korean ... taas oo ka dhigeysa mid ku habboon tattoosyada leh qoraalka.
Halkan waxay ka timid lixdannadii, oo ay weheliso yoga, markii uu jiray koboc ruuxi ah oo qabsaday dhammaan wixii ka yimid Bariga, iyo gaar ahaan Hindiya.
Om calaamadaha fikradaha tattoo
Sidaad ku aragtay qaybtii hore, yeelashada astaamaha Om oo la sawiray waxay ka dhigan tahay, sida caadiga ah, in tatuukeenu ka gudbo waxa loo yaqaan 'tattoo bilicsanaanta'.
Mid ka mid ah qaababka badan ee tattoo-ga ay ku dheehan tahay astaantan uu qaadan karo waa cabbir aad u yar. Ahaanshaha astaan ​​nadiif ah oo xarrago leh waxay umuuqataa mid fiican, marka lagu daro, isagoo aad u yar waxay u egtahay mid ku fiican dhammaan noocyada kala duwan ka soo horjeed ahaan: curcurka, faraha, canqowga ...
Kaliya maahan inay dadku ku nool yihiin Om, haddii aad rabto inaad la socoto wax kale, Waad dooran kartaa inaad sawirto mantra oo dhan oo leh calaamaddan sida halyeeyada. Maaddaama ay jiraan xarfo badan oo lagu qori karo, dooro midka ugu badan ee la xiriira mantra aad jeceshahay. Dabcan, hubi inuu si wanaagsan u qoran yahay!
Qaabka wareega ee Om wuxuu u muuqdaa mid ku fiican meelo badan. Laabta ayaa ka mid ah kuwa ugu lama filaanka ah. Hadday la socoto mantra, sida sawirka, ama kali, waa fikrad aad u fiican in sidoo kale ay jirto mandala la joogo oo si qoto dheer loo siiyo halabuurka. La ciyaar hooska iyo qaabdhismeedka (khadadka khafiifka ah ama dhumucda leh, dhibcaha…) si aad naqshadda u samaysato hypnotic
Ganesha, ilaaha maroodiga
Mid kale oo ka mid ah halyeeyada waaweyn ee ku xardhan sawirka leh astaanta Om waa ilaah Ganesha, oo ah wiilka laba ka mid ah ilaahyada aan kor ku soo xusnay. Ilaahan madax-maroodiga ah, ee lagu tiriyo inuu gacan ka gaystay sidii looga saari lahaa caqabadaha, wuxuu xiriir dhow la leeyahay astaanta Om. Xaqiiqdii, mantra waa oṃkārasvarūpa, 'Om waa qaabkeeda' maadaama la rumeysan yahay inuu yahay qaab jireed fikradda ka dambeysa astaanta.
Tattoo-ka Ganesha waa mid aad u qabow dhinacyada oo dhan, ha ahaato midab, madow iyo caddaan, faahfaahsan ama kaariko badanIn kasta oo ay had iyo jeer u janjeerto in astaamaha Om la saaro fooddiisa. Qaado fursad aad ku iftiimiso, tusaale ahaan, oo leh tattoo gabi ahaanba madow iyo caddaan ah laakiin leh faahfaahin cas, ama la raac dhammaan mantraheeda si aad u siiso taabasho ka duwan oo gaar ah.
Om leh unalome
Waxaan horey uga soo hadalnay munaasabadda munaasabadaha kale. Ahaanshaha khadka nolosha, oo matalaya dhammaan dhibaatooyinkii aan kala soo kulannay jidka, dhamaadka dabiiciga waxay kujirtaa matalaada Om oo tilmaameysa inaan gaarnay heer buuxa iyo iftiin.
Xamsa iyo Om
Laba dhaqan oo aad moodo inay kala fog yihiin naqshad keliya oo umuuqata kuwo fiican. Xamsa waa astaan ​​qadiim ah oo kahortaga jinniinta sharka leh sida caadiga ah dhaqanka carabta iyo yuhuudda. Xaaladdan oo kale, naqshadeynta ayaa isku daraysa gacanta shanta farood ee hamsa oo leh astaamo Om halkii ay ka ahaan lahayd isha asalka ah.
Tilmaamaha Om oo leh geed
Waxaad aragtaa in astaamaha Om lagu dari karo tiro badan oo naqshado kala duwan ah, iyo sidoo kale cabirro iyo goobo kala duwan. Xaaladdan oo kale tattoo waxaa lagu daray geed (astaamo isku dhafan oo wanaagsan, maadaama geedaha ay sidoo kale la xiriiraan xiriirka adduunka, iyo gaar ahaan dabeecadda) taasi waa hubaal inay noqon doonto mid cajiib ah mar midab leh ama midab leh.
Tattoo Om oo leh ubaxyo lotus ah
Ugu dambeyntii faallo in calaamaddan, Om, ay caadi tahay in lagu sawiro ubax lotus ah. Astaan ​​kale oo leh xoog weyn, taasina waa in ubaxa lotus uu awood u leeyahay inuu ku dhasho dhoobo, nidaaminta heerkulkeeda iyo faahfaahinta aan dhamaadka lahayn si uu ula qabsado oo ugu dhasho meel kasta. Waxay astaan ​​u tahay xoog, daahirnimo.
Tattoos oo leh astaamaha Om ayaa ah mid aad u xiiso badan labadaba fikradaha iyo macnaha, sax? Noo sheeg, ma leedahay tattoo lamid ah? Maxay uga dhigan tahay kiiskaaga? Sida had iyo jeer, haddii aad ku dhiirratid inaad nala wadaagto sawirkaaga, waan ku farxi doonaa inaan ku caawinno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos diimeed » Tattoos oo leh astaamaha Om, ruux ahaanta maqaarka
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa inaan helo sawirka Gayatr Mantra laakiin ma garanayo haddii ay jiraan wax xaddidaad ah maxaa yeelay waa astaan ​​muqaddas ah: Waxaan rabaa inaan dhigo garabka midig (dhib malahan hadduu bidix ama midig yahay) ma yihiin xannibaadyo la xiriira naqshadeynta (oo ay ugu wacan tahay yantras-ka iyo kuwa kaleba)? Mahadsanid, waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto. Salaan.
Jawaab Camilo Uribe